October 17, 2020 - Achawlaymyar
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲကတော့ သူမနေထိုင်ရာ သြစတေးလျနိုင်ငံ Sydney မြို့မှာပဲ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးမီးခဲ ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့ သမီးကြီး ဖြူဖြူစင်စင်လင်းအပြင် ဒုတိယအိမ်ထောင်က သမီးကြီး Narnia နဲ့ သားငယ် Napolion တို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးမီးခဲကတော့ မကွယ်လွန်ခင်အချိန်မှာ သားသမီးသုံးယောက်စလုံးကို မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး မိခင်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ကတော့ မီးမီးခဲရဲ့ သမီးအလတ်လေး Narnia ရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Narnia က သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာ မိခင်မရှိပဲ ဖြတ်သန်းနေရပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူက အနားမှာရှိနေပြီး သမီးလေး မျက်နှာတစ်ချက် မပျက်ရအောင် အစစအရာရာ လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်စည်းပေးနေတာကို အခုလိုပဲ … Read more
မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ သူကစားနေတာပေါ့။ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆင်ကြီးလို လေးဖက်ထောက်ကြီး တွားသွားလိုက်၊ဗွက်တွေကို ဖင် ခုထိုင်လိုက်နဲ့။ ပုစွန်လုံးပေါက်လေးတွေကို ဖမ်းလိုက်၊ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်။သူ့ဘာသာသူ သဘောတွေကျပြီး တခစ်ခစ်ရယ် နေတတ်သေးတာ။ သူဘာလို့ အဲဒီလောက်ပျော်နေပါလိမ့် ဆိုတာကျွန်တော်မသိ။သူကတော့ ‌ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်ဘဲ ပျော်နေတာပဲ မကြာပါဘူး။ သူ့အမေက တုတ်ကြီးကိုင်ပြီးလာတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနားမရောက်ခင်ကတည်းက သူ့ကိုကြိမ်းလာတာ။ သူ့မျက်နှာမှာ ခုနကပျော်နေတာတွေ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ။မျက်နှာက ညှိုးလာတယ်။မျက်လုံးကလေးတွေကိုကြည့်တော့ ကြောက်နေမှန်း သိသာတယ်။ “နင်လာစမ်း၊အဲဒီဗွက်တွေထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ။”သူ့အမေကခေါ်နေပေမဲ့ သူက ချက်ချင်းမသွားဘူး။ထိုင်လျက်ပဲ။ သူ့အမေ ပိုပြီးဒေါပွလာပြီ။ “ဟဲ့၊ငါပြောနေတာမကြားဘူးလား။” ပြောလည်းပြော သူ့အနားလည်းရောက်သွားပြီး ရိုက်မယ်လို့တုတ်ကိုလှမ်းအမြှောက်မှာ ကျွန်တော်က “အစ်မ”လို့ ခေါ်လိုက်တယ်။ သူ့အမေက သူ့ကို မရိုက်မိလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်က “ဘာဖြစ်လို့ ကလေးကို ရိုက်မှာလဲ”လို့မေးလိုက်တယ်။ သူ့အမေ ကြောင်သွားတယ်။ “နင်မမြင်ဘူးလား။သူ ဗွက်ထဲမှာ ကမြင်းကြောထနေတာ”တဲ့။ “အဲဒါကြောင့် … Read more
ဒီလ ၃၀ရကျနမှေ့ာ ထိုးသတျတော့မယျ့ အောငျလတို့ ပှဲကို သုံးသပျခကျြပေးလာတဲ့ ဖိုးသျော ONE Chmapionship ဟာ လာမယျ့ အောကျတိုဘာလ 30 ရကျနမှေ့ာ ONE: Inside The Matrix အမညျ နဲ့ ပွိုငျပှဲ ကငျြးပသှားမယျ့ အကွောငျး တရားဝငျ ထုတျပွနျ ကွငွောလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲစဉျမှာ အောငျလအနျဆနျးရဲ့ ခါးပတျလုပှဲလညျးပါဝငျနတောဖွဈပွီး အမြားစုက အထူးစိတျဝငျစားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ နာမညျကြျော MMA ဖိုကျတာတဈဦးဖွဈတဲ့ ဖိုးသျောကတော့ အောငျလအနျဆနျးကို အနိုငျယူနိုငျဖို့ဆိုတာခကျခဲလှတယျလို့ ဆိုလာခဲ့တာဖွဈပွီးလကျရှိ အောငျလအနျဆနျးရဲ့ ဘယျသူမှမသိသေးတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ ၅ ခုကိုလညျး ထုတျဖျောပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဖိုးသျောက “သူ့ရဲ့အားသာခကျြအနနေဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ နံပါတျ (၁) အနနေဲ့ အောငျလအနျဆနျးကလကျရှိနှဈထပျကှမျးခနျြပီယံ အဲ့လိုမြိုးရထားတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ယုံကွညျခကျြက အမွငျ့ဆုံးမှာရှိနတေယျပေါ့နျော…. ပွီးရငျ နံပါတျ … Read more
ကလေးရယ် ..ဦးတို့က လူဆိုး၊လူကြမ်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးကွယ် ကလေးတို့မိသားစု အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရအောင်အတွက်ပါ Qဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကလေးငယ်လေးကိုမိခင်ထံမှကုသရေး စင်တာသို့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ ဆွေတော်မျိုး တော်တို့လည်းအထူးဂရုစိုက်မဲ့အချိန်လေးရောက်လာပါပြီ မြင်သူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်အနာခံပေးသောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားလုံးကိုလေးစားဦးညွှတ်ဂါရဝပြုအပ်ပါသည်… စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာဖို့လဲ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ… unicode, ကလေးရယျ ..ဦးတို့က လူဆိုး၊လူကွမျးကွီးတှမေဟုတျပါဘူးကှယျ ကလေးတို့မိသားစု အမွဲပြျောပြျောရှငျရှငျနရေအောငျအတှကျပါ Qဝငျဖို့ရနျအတှကျကလေးငယျလေးကိုမိခငျထံမှကုသရေး စငျတာသို့ချေါဆောငျသှားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးပါ ဆှတေျောမြိုး တျောတို့လညျးအထူးဂရုစိုကျမဲ့အခြိနျလေးရောကျလာပါပွီ မွငျသူတိုငျးစိတျမကောငျးဖွဈရ ကိုယျကြိုးစှနျ့အနဈအနာခံပေးသောကနျြးမာရေးဝနျထမျးအားလုံးကိုလေးစားဦးညှတျဂါရဝပွုအပျပါသညျ… စိတျရောကိုယျပါကနျြးမာခမျြးသာဖို့လဲ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျဗြာ… Video ,ကြည့်ရန်
ကျူ ဝင်တဲ့သူတွေ အထူးသတိထားရတော့မယ့် အချက် ကိုယ်ကစိုးရိမ်လို့ Q ဝင်လိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်မှာ ဘာရောဂါပိုးမှ မရှိရင်တောင် ပိုးရှိတဲ့သူ တယောက်ပါလာတာနဲ့ အကုန်ကူးတာပဲ ကိုဗစ်လူနာတွေ များရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက အဲဒါပဲ အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ဖြစ်နိုင်လို့ မစိုးရိမ် ရရင် အိမ်မှာပဲ တယောက်ထဲ သီးသန့်ခွဲနေပါ စိုးရိမ်ရမှ ဆေးရုံသွားတာ ပိုကောင်းတယ် ခုဖိုးချစ် ဇနီးလောင်း ကိုဗစ်ကူးတာ အဲဒါကြောင့်ပဲ သူသွားပြတဲ့ဆေးခန်းက လူနာတယောက် ကိုဗစ်ပိုးနဲ့​ သေသွား တော့ သူကစိုးရိမ်ပီး Qသွားဝင်လိုက်တာ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုဗစ်ပိုးနဲ့ သေသွားသူရဲ့ မိသားဝင်တွေနဲ့ တခန်းထဲ အတူတူဝင်ရတော့ အကုန်ကူးပါလေရေ အထူးသတိထားရတော့မယ့် အချက်ပါ credit ———————— ကြူ ဝငျတဲ့သူတှေ အထူးသတိထားရတော့မယျ့ အခကျြ ကိုယျကစိုးရိမျလို့ … Read more
မိန်းကလေးများ အထူး ဖတ်သင့်တဲ့ သံပုရာသီး အစွမ်းအံ့မခန်း *ခံတွင်း ကျန်းမာရေး* သံပုရာသီးဟာ သွားကို ဖြူစေပါတယ်။ သံပုရာသီးအခွံကိုဆား (တကော်စာ)နဲ့ ရောပြီး ပွတ်ပေးရင် သွားကို ဖြူစေရုံတင်မကဘူး။ တောက်ပစေပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းတာလည်း ပျောက်စေပါတယ်။ သွားကိုက်နေရင်လည်း သံပုရာရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ *နှုတ်ခမ်းကွဲခြင်း* မျက်နှာလိမ်းခရင်မ်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်သောက်ဇွန်း) နဲ့ လိမ္မော်ရည်၊ ပျားရည်တို့ကို ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်လောက် လိမ်းရုံနဲ့ သိသာ ထင်ရှား ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မယ်။ *ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း* အုန်းရည်လေးဇွန်း (စားပွဲတစ်ဇွန်း)နဲ့ သံပရာရည်တို့ ရောစပ်ပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် လိမ်းပေးရင် ဆံပင်ကျွတ်တာ ပျောက်ကင်း စေပါတယ်။ *ဦးရေပြား ယားယံခြင်းနှင့် ဒဏ်ပျောက်ဖို့အတွက်* ကြက်ဥအကာရည်နှင့် သံပရာရည် (သံပုရာသီးတစ်လုံးစာ) တို့ရောပြီး ဆံနွယ်အမြစ်ကနေ … Read more
အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးပြီးစီးမှု အခြေအနေ ရုပ်သံ
သရုပ်ဆောင်လူမင်း ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးပြီးစီးမှုအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေနဲ့ ရုပ်သံကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်စတင်ရိုက်ကူးရေး မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၃၀ ရက်နေ့မှာတော့ ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်းတွေကို စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဒီကားကို ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဒါရိုက်တာ လူမင်းက ဆိုပါတယ်။အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်အတွက် ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုပိုင်းကို တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ ပန်းချီစိုးမိုးကတော့ “နဂိုက ရွေးပြီးသားကတော့ ဗိုလ်ချုပ်နေရာရယ်၊ ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာရယ် နဂိုဇာတ်ကောင်တွေ ရွေးပြီးသားပေါ့၊ ကျန်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေကတော့ နောက်ပိုင်းမှ ရွေးတာ၊ သရုပ်ဆောင်ကတော့ အပြင်လူထက်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့၊ အမူအရာကောင်းမှ ဇာတ်ရှိန်တက်တာ၊ အဲတော့ အပြင်လူလည်း … Read more
ချစ်တဲ့သူကို သတိရတဲ့အခါ ဒီလိုလုပ်ပါ
ချစ်သူကို သတိရတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ ? လို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မေးပါတယ် ။ ဒီတော့ ” မေတ္တာပို့ပါ “လို့ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အေးချမ်းပါစေ .။ဘေးအန္တာရယ်တွေက ဝေးပါစေ ။စိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့ ။ ခန္ဓာ့ဆင်းရဲကို မခံစားရပါစေနဲ့ ။လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ပါစေ ။ကြံစည်တိုင်း ဖြစ်ထွန်းပါစေ ။လူမိုက်တွေ ရန်က ဝေးပါစေ ။သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာ ဆုံတွေ့ပါစေ ။ စတဲ့ မေတ္တာတွေ ပေးပို့လိုက်ပါ ။ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြန်ဆုံးယာဉ်ဟာ စိတ်ဖြစ်သလို ခွန်အားအကြီးဆုံးကလည်း စိတ် စွမ်းအင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို အမြန်ဆုံးနဲ့ စွမ်းအားအကြီးဆုံး စိတ်ကို အသုံးချပြီး မေတ္တာပို့တဲ့အခါ မေတ္တာတရားရဲ့ အကျိုးကို တကယ်ပင် ရရှိပါတယ် ။ “အချစ်”ရယ် … Read more
အားကစားလုပျပွီး ရလေုံလောကျစှာမသောကျသုံးရငျ ဘာတှဖွေဈနိုငျသလဲ
လူတော်တော်များများက အားကစားလုပ်နေစဉ်အတွင်း နဲ့ အားကစားလုပ်ပြီးချိန်မှာ ရေများများသောက်ခြင်းဟာ မကောင်းဘူးလို့ယူဆထားကြတယ်။ ကျွင်းကျင်သူတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့ ရေပမာဏ မရရှိခဲ့ရင် ဆိုးကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောထားကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာကတော့ အားကစားလုပ်ပြီး ရေလုံလောက်စွာမသောက်သုံးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းပါ။ အသားအရေတွေ ခြောက်ကပ်လာမယ် အားကစားလုပ်ခြင်းက အသားအရေ နုပျိုခြင်းနဲ့အိုမင်ခြင်း အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အားကစားလုပ်ခြင်းက သွေးလည်ပက်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး ကော်လဂျင် များများထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် အသားအရေ တွန့်ခြင်းကို လျှော့ကျစေပါတယ်။ အဆီမကျပဲရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမယ် တစ်ချို့လူတွေက အားကစားလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ရေမသောက်ဘူးဆိုရင် ဝိတ်မြန်မြန်ကျတယ်လို့ ယူဆထားကြတယ်။ အားကစားလုပ်ပြီးပြီးချင်းမှာ ဝိတ်ချိန်ကြည့်လိုက်ရင် ဝိတ်နည်းနည်းကျနေတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီပိုတွေ လောင်ကျွမ်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ရေဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။ ရေဓာတ်မလုံလောက်ခြင်းက အဆီပိုတွေလောင်ကျွမ်းမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့် အသားအရေတွေ ခြောက်ကပ်လာပါလိမ့်မယ်။ … Read more